बाघ निर्माताको बाघ चाल : सम्पत्ति जोगाउन फिल्मी शैलीमा हेमालाई इन्ट्रि ! पुरा जानकारी अब यहाँबाट पढ्नुहाेस – ताजा समाचार
बाघ निर्माताको बाघ चाल : सम्पत्ति जोगाउन फिल्मी शैलीमा हेमालाई इन्ट्रि ! पुरा जानकारी अब यहाँबाट पढ्नुहाेस
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवि ओझाबाट भोगेको घरेलु हिंसाको वृत्तान्त सार्वजनिक गरेपछि केहि हप्तादेखि मिडियामा उनिहरुकै समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । चलचित्र बजार उनिहरुकै गफगाफले तातेको छ, चिया खाने चियापसल देखि दारु खाने भट्टि र रेष्टुरेन्टसम्म उनिहरुकै बारेमा गफगाफ चल्ने गरेको छ ।छविसँग झगडा परेपछि झण्डैं १ महिनायता आफन्तको घरमा बस्दै आएकी छिन् शिल्पा ।
उनले छविविरुद्ध डिभोर्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकी छिन् । पटक पटक कुटपिट, झगडा, अपाच्य रुपमा नानाथरिका कुरा बोल्ने, २४ सै घण्टा घरमा बन्देज बनाएर राख्न खोज्ने छविको व्यवहार सहन नसकेपछि शिल्पाले छविसँग अलग हुने सोच बनाएको बताइन् । पछिल्लो समय असार ८ मा चलचित्र ‘कविर सिंह’ हेर्न जाने निहुँमा उत्पन्न विवादपछि छविले शिल्पालाई कानको जालीमा प्वाल पर्ने गरी कुटपिट गरेको शिल्पाको आरोप छ । तर, छविले भने यो कुरा स्विकारेनन् । यदि कानमा प्वाल परेको थियो भने किन तुरुन्तै उजुरी गरिनन् ? तुरुन्तै किन अस्पताल गइनन् ? छवि भन्छन्, ‘यो सवै आरोप हो ।’
दुवैले एक अर्कालाई दोष थोपर्ने काम मात्रै गरिरहेका बेला केहि दिनअघि आइतबार अचानक अचम्मको खबरले आयो । छविकी पहिलो श्रीमती हेमा ओझाले महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा छवि–शिल्पाविरुद्ध बहुविवाहको उजुरी दर्ता गरिन् । यो घटना मिडियामा सार्वजनिक भएपछि धेरैले अचम्म मानेका छन् ।शिल्पालाई छविले चौथो श्रीमतीको रुपमा घर भित्राएकी हुन्, तिनवर्षअघि । धेरैलाई छविका विगतका घटनाबारे थाहा भएपनि ति श्रीमतीहरुले छोड्दै गएको मात्रै बुझेका थिए । तर, हेमासँग डिभोर्स नगरेरै छविले अन्य युवतीलाई श्रीमती बनाएको यो घटनापछि बुझ्न सकिन्छ ।